1-1-1996 AND 1-1-2012 (၁၆ နှစ်မြောက် အမှတ်တရ) ~ Nge Naing
Monday, January 02, 2012 Nge Naing 75 comments
တခြားဘာတွေပဲ ပြောင်းလဲခဲ့ပါစေ တူတာတွေတော့ အများကြီး ရှိနေသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကို မပြောချင်ဘူး မပြောင်းမလဲဘဲ ဆက်လက် ထိန်းထားနိုင်တာကိုပဲ ဒီနေ့ ဘ၀မှတ်တမ်းမှာ အမှတ်တရ သိမ်းထားချင်ပါတယ်။
တနေကုန် ချက်ပြုတ်၊ လျှော်ဖွပ်၊ ဆေးကြော သန့်ရှင်းစတဲ့ အိမ်အလုပ်တွေနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေခဲ့ရာကနေ ရေမိုးချိုး စားသောက်ပြီး အားလုံး ပြီးစီးသွားလို့ နာရီကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ၁၁ နာရီတောင် ခွဲပြီးနေပါပြီကော ဆိုပြီး နေ့မကူးခင် ကတန်းကမန်းပဲ အ၀တ်အစားလဲ၊ ဘုရားမီးထွန်း ဘုရားရေလဲကာ ဘုရားကို အတိုချုပ်ပဲ ရှိခိုးလိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ ၁၆ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် မင်္ဂလာအထိမ်းအမှတ် အဖြစ် သားကိုခေါ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ထားပေးခိုင်းတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ၁၆ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဖြစ်တဲ့ မနေ့က ၁-၁-၁၂ ရက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်ကာလကို နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင် ကျွန်မတို့မှာ ဘ၀အတက်ကျ၊ အနှိမ့်အမြင့် ဖြတ်သန်းမှုတွေက ပြောလို့ မကုန်နိုင်မခမ်းနိုင်လောက်အောင် အပြောင်းအလဲ များပြားလှပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်တိတိဖြစ်တဲ့ ၁-၁-၉၆ ရက်နေ့နဲ့ ဒီနှစ် ၁-၁-၂၀၁၂ ရက် ဒီနှစ်ရက်တည်းကိုပဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တခြားဘာတွေပဲ ပြောင်းလဲခဲ့ပါစေ တူတာတွေတော့ အများကြီး ရှိနေသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မအခုပြောလိုတာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကို မပြောချင်ဘူး မပြောင်းမလဲဘဲ ဆက်လက် ထိန်းထားနိုင်တာကိုပဲ ဒီနေ့ ဘ၀မှတ်တမ်းမှာ အမှတ်တရ သိမ်းထားချင်ပါတယ်။ ဘာတွေမပြောင်းမလဲဘဲ တူနေသလဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ကျရောက်တဲ့ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဟာလည်း တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ တိုက်နေတယ်။ နောက်တချက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်က ကျွန်မတို့ မင်္ဂလာဆောင်ရာမှာ ၀တ်ခဲ့တဲ့ အ၀တ်အစားကိုပဲ ဒီနှစ် ၁-၁-၁၂ မှာ ၀တ်ထားတာ တူတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ ဆံပင်အရှည်ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်က အရှည်အတိုင်းပဲ ဖြစ်တာ တူပါတယ်။ နောက်ဆုံးတချက်ကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရင်ထဲက အချစ်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်နဲ့ အခု အတူတူ ဖြစ်နေဆဲဆိုတာပါပဲ။ နေ့စွဲနှစ်ခု အောက်ကပုံတွေကို ဆက်လက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
1-1-96 Sunday (၁-၁-၉၆ တနင်္ဂနွေနေ့)
၁-၁-၉၆ ခု၊ ABSDF ဗဟို ကရင်နီနယ်မြေကို ရောက်နေစဉ် ကျွန်မတို့နှစ်ယေက် ဘ၀တခုကို ထူထောင်ဖို့ လက်ထပ်ခွင့်တင်တားတာ လက်ထပ်ခွင့်ရတာနဲ့ ထတမမောလဲလို့ ခေါ်တဲ့ ထိုင်းရွာအနီးက ကရင်နီတောင်ခြေ တနေရာမှာABSDF ဗဟိုဌာနချုပ်အဖြစ် ဆောက်လုပ်ခဲ့တတဲ့ စခန်းရှိ မိသားစု တန်းလျားမှာ ဒီအိမ်လေးကို မင်္ဂလာမဆောင်ခင် အပြီးဆောက်ပြီး ဒီအိမ်လေးပေါ်မှာ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ (မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နှစ်လပဲနေလိုက်ရပြီး ရန်သူစစ်ကြောင်းထိုးလို့ တခြားတနေရာကို ဗဟိုရွှေ့ရပါတယ်။)
အဲဒီတုန်းက ABSDF ဗဟိုတရားသူကြီးဖြစ်သူ ဦးတင်ရွှေ (ကွယ်လွန်) က မင်္ဂလာ သြ၀ါဒပေးနေစဉ်၊ သူပေးတဲ့ သြ၀ါဒက သူများတွေလို လင်ရယ်မယားရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ရန်မဖြစ်ဖို့ မပြောဘဲ ရန်မကြာခဏ ဖြစ်ပေးပါတဲ့ အဲဒါမှ ပိုပြီးတော့ အသစ်တဖန် ပြန်ချစ်ကြတာတဲ့။ အခုထိ အမှတ်ရနေပါတယ်။
သူများတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ တယောက်ကိုတယောက် ခွံ့ကျွေးရပါတယ်။
ကျွန်မက မရှက်ဘဲ အရေးထဲသူက ရှက်နေတယ်။ (ဆံပင်စည်းထားတဲ့ ခေါင်းစည်းကိုတော့ သူငယ်ချင်း မဗေဒါက သိုးမွေးနဲ့ တချောင်းထိုး ထိုးထားပေးတာပါ)
ဗဟိုတရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင် နောက်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးတင်မောင်လွင်က လက်ထပ်ချုပ်ပေးအပ်တာကို လက်ခံယူနေစဉ်
မင်္ဂလာပွဲပြီးခါနီးမှာ ကျွန်မတို့ထက် တလစောပြီး မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ ကိုထူးမြတ် မဆူးပွင့် ဇနီးမောင်နှံနဲ့ အမှတ်တရ
နှစ်ယောက်တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံကောင်းကောင်း မကျန်လို့ အဲဒီအချိန်က ကျွန်မတို့ကို အင်္ဂလိပ်စာလာသင်ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတဦးနဲ့ တွဲပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ဖြတ်ညှပ်လုပ်ထားပါတယ်။
1-1-12 Sunday, ၁-၁-၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့
အခု ဒီနှစ် ၁-၁-၂၀၁၂ နေ့မှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာ ကျွန်မ ၀တ်ထားတဲ့ ထမီကလွဲရင် ကျန်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်က ကျွန်မတို့ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ၀တ်ခဲ့တဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ဖြစ်ပြီး ကျွန်မ ၀တ်ထားတဲ့အင်္ကျီက မင်္ဂလာဆောင်ရင် ၀တ်ဖို့ဆိုပြီး ကျွန်မကိုယ်တိုင် လက်ချုပ်အပ်နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီပါ။ ဒီအ၀တ်အစားတွေကို လျှော်ဖွပ် ကြယ်သီးပြုတ်နေတာ မခိုင်တာကို ပြန်တပ်ရတာလည်း တနေကုန် အလုပ်များတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲမှာ ပါပါတယ်။ အမှတ်တရအဖြစ် သားက ရိုက်ပေးထားပါတယ်။
ဒီနှစ်ချက်တာ အားလုံးက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ထိုင်းစားစရာတွေပဲ ဖြစ်တော့ ဗမာစားစရာပဲ ကြိုက်တယ်ဆိုသူများအတွက် အရင်နှစ်ကတင်တဲ့ မြန်မာမုန့်ဟင်းခါးကို ထည့်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနှစ် ၁၆ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနေ့မှာ ဘာချက်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားတော့ သုံးယောက်စလုံး ကြိုက်တဲ့ စားစရာဆိုလို့ မုန့်ဟင်းခါး အမျိုးပဲ ရှိတော့ မုန့်ဟင်းခါးကိုပဲ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မုန့်ဟင်းခါးက အရင်နှစ်ကလည်း ချက်တယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ လင်မယားက ထိုင်းမုန့်ဟင်းခါးကို ပိုကြိုက်ပြီး သားက မြန်မာမုန့်ဟင်းခါးကို ပိုကြိုက်တာကို စဉ်းစားပြီး စိတ်အိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ သားက မေမေတို့ကြိုက်တာကိုပဲ ချက်ပါလို့ နားလည် ပေးလိုက်လို့ အဖေကြိုက်တဲ့ ထိုင်းမုန့်တီကိုပဲ ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်မ တသက်မှာ သားကြိုက်တာထက် ယောက်ျားကြိုက်တာကို ပိုဦးစားပေးလိုက်တာ ပထဦးဆုံးအကြိမ် ဖြစ်တယ်။ သားနဲ့ယှဉ်လာရင် ကျွန်မဟာ သူ့ကို တခါမှ ပိုပြီးဦးစားပေးလေ့ မရှိပါဘူး။ ဒီနေ့မှာတော့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် လက်ဆောင်အဖြစ် သဘောထားပြီး သူ့ကို ဦးစားပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်ကထိုင်းမုန့်တီကတော့ ဒီနှစ် နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ၁၆ နှစ်မြောက် အမှတ်တရ ချက်ထားတဲ့ လာလည်သူများ အားလုံး မြိန်ရှက်စွာ သုံးဆောင်နိုင်ရန် ဖြစ်ပြီး ထိုင်းမုန့်ဟင်းခါး မကြိုက်သူများက ထမင်းကို ထိုင်းသင်္ဘောသီးထောင်း၊ ထိုင်း Toyom ဟင်းချို၊ ပုဇွန်ကင်နဲ့ သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ထိုင်းမုန့်ဟင်းခါး အမျိုးမျိုး ရှိသည့်အနက်က ငါးနဲ့ချက်ပြီး ငါးဆုပ်လုံးနဲ့ စားတဲ့ ဟင်းဖြစ်တယ်။ ထိုင်းမုန့်ဟင်းခါးကို ပဲတီ၊ ပီးတောင့်ရှည်၊ သခွါးသီး၊ ပင်စိမ်းရွက်၊ မုန်ညှင်းချည်ဖတ်၊ ထိုင်းထိကရုဏ်းပင်တို့ထည့်ပြီး အသီးအရွက်များများနဲ့ စားတဲ့အတွက် ဗမာမုန့်ဟင်းခါးနဲ့စာရင် ပိုပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်။ အခုဒီမှာတော့ ထိကရုဏ်းလည်းမရနိုင်လို့ မပါဘူး။ ပင်စိမ်းကလည်း အိမ်နဲ့နီးတဲ့ဆိုင်မှာ မရလို့ ပင်စိမ်းအစား ထိုင်း Basil အရွက်ကို သုံးထာပါတယ်။
ဒါက ထမင်းနဲ့စားဖို့ ထိုင်းသင်္ဘောသီးထောင်း၊ ထိုင်း Seafood Toyam soup နဲ့ ပုဇွန်ကင်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်နဲ့ အခု မတူတာမပြောချင်ဘူး တူတာကိုပဲ ပြောချင်တယ်လို့ အပေါ်မှာ ဆိုထားပေမဲ့ တခုတော့ ပြောချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ် မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ရှင်မတောင် သနပ်ခါးတုံးကို ကိုယ်တိုင်ကျောက်ပျဉ်နဲ့ သွေးပြီးလိမ်းထားတဲ့ မျက်နှာပေါ်က အနံ့သင်းသင်း ရှင်မတောင် သနပ်ခါး၊ ကိုယ်တိုင်ဆောက်ထားတဲ့ အင်ဖက်မိုး ကျူထရံကာအိမ်နဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို လွမ်းမိတာတော့ အမှန်ပဲ။
ဒီနှစ်နှစ်သစ်ဟာ အားလုံးအတွက် မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကောင်းသောလိုရာဆန္ဒများ အသီးသီး ပြည့်ဝကြပါစေ။ မကောင်းမှုတွေကို အသီးသီးရှောင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
(မနေ့က အချိ်န်မရလို့ ဒီနေ့မှ တင်ဖြစ်ပါတယ်။)
Posted in: ABSDF တောတွင်းဘ၀ပုံရိပ်,အချစ်/မေတ္တာ,အမှတ်တရနေ့များ
January 3, 2012 at 8:11 AM Reply
ကိုကျော်နိုင် နဲ့ မငယ်နိုင်
၁-၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ကိုကျော်နိုင် နဲ့ မငယ်နိုင် ရဲ့ ၁၆ နှစ်မြောက် လက်ထပ်မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်လိုပဲ ရွှေရတုလက်ထပ်မင်္ဂလာ၊ စိန်ရတုလက်ထပ်မင်္ဂလာ၊ ပလက်တီနမ်ရတုလက်ထပ်မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်ပွဲတွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာ ဆက်လက် ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။
January 3, 2012 at 9:17 AM Reply
Ah Ko Kyaw Naing
Ah Ma Nge Naing
Congratulations on your 16th Wedding Anniversary!
ကျွန်တော် လူကက်ဆက် (ဇာတ်သိမ်း) says:
January 3, 2012 at 9:34 AM Reply
Sonata Cantata says:
January 3, 2012 at 12:38 PM Reply
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆နှစ်ကအင်္ကျီကို ၀တ်လို့ရနေသေးတာကတော့ တော်တော် မနာလိုစရာကောင်းတာပဲး)
January 3, 2012 at 1:18 PM Reply
အစ်ကိုကျော်နိုင် နဲ့ အစ်မငယ်နိုင် ရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် အခါသမယမှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
January 3, 2012 at 2:28 PM Reply
- သမ သဒ္ဓါ ဆိုတဲ့ တူညီသော ခံယူချက်
- သမ သီလာ ဆိုတဲ့ တူညီသော အမူအကျင့်
- သမ စာဂါ ဆိုတဲ့ တူညီသော ပေးကမ်းမှု
- သမ ပညာ ဆိုတဲ့ တူညီသော အတွေးအခေါ် ဗဟုသုတ
ရှိတဲ့အတွက် မာရသွန်အိမ်ထောင်ခရီးရှည်ကြီးမှာ ၁၆ နှစ် မိုင်တိုင်ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြတ်ကျော်လာနိုင်တာပါ..
ရှေ့ဆက်ပြီး သမ သဒ္ဓါ၊ သမ သီလာ၊ သမ စာဂါ၊ သမ ပညာ တို့ကို ဆက်လက် ကိုင်စွဲကာ ဘဝခရီးကို ပျော်ပျော်ကြီး အတူလျှောက်လှမ်းပြီး ဇနီးမောင်နှံ ရာသက်ပန် စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်..
January 3, 2012 at 7:49 PM Reply
(အနည်းငယ် နောက်ကျနေပေမယ့်) ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်ပါစေ မငယ်နိုင်ရေ..၊ ၁၆ နှစ်မှသည် ရတုများစွာတိုင် တွဲလက်တွေ ခိုင်မြဲပါစေလို့ လည်း ဆန္ဒပြုပါတယ်..။
January 3, 2012 at 7:52 PM Reply
လာရောက် ဆုတောင်းပေးသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ပို့စ်တင်ပြီး သိပ်ပြန်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။
ဂရမ်မာ ကြာရွက် - ပလက်တီနာမ် ရတုဆိုတာလည်း ရှိသေးလား အခုမှသိတယ်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေလို့ ပြောရအောင်ကလည်း အဲလောက်ထိတော့ အသက်မရှည်ဘူးထင်တယ်။
မသီတာ - ကျွန်မလည်း သားကိုမွေးပြီး အသက် ၃၅ နှစ်အထိ တော်တော်လေး ကီလိုတက်တယ်။ ၃၅ နှစ်ပြည့်ပြီးမှ အ၀လွန်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ကျောင်းမှာ သင်ရတော့ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ BMI ကို ပြန်ညှိရတာ။ ၁၆ နှစ်မကဘူးနော် အပေါ်မှာ ဂရမ်မာကြာရွက် ပြောထားတဲ့ ရတုတွေအထိ ၀တ်လို့ရနေမှာပါ။ မသီတာလည်း မနာလို မဖြစ်ရအောင် ကျွန်မရဲ့ အာဟာရနဲ့ ဆီးချိုရောဂါအကြောင်း ရေးထားတဲ့ပို့စ်တွေ ဖတ်ကြည့်ပြီး BMI ညှိလိုက်လေ။
မောင်မေတ္တာ ပြောသလောက်လည်း အစ်မတို့နှစ်ယောက်က မတူပါဘူး။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။
Sein Lay၊ ပြည်သူ့ဘက်သားတို့ရဲ့ ဆုတောင်းတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။
ကျွန်တော်လူကက်ဆက် ဇာတ်သိမ်းကို ကျွန်မ facebook မှာ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ဒီစာကို ရေးတဲ့ ပန်းချီထိန်လင်းနဲ့လည်း facebook friend ပါ။
စာလာဖတ်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ။
January 3, 2012 at 8:00 PM Reply
ကိုညီလင်းသစ် ကျွန်မ ပို့စ်စတင်တာကိုက နောက်ကျပြီးမှ တင်ခဲ့တာဖြစ်တော့ စာလာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ နောက်ကျတယ် စောတယ်ဆိုတာ ဘာမှ ထည့်မတွက်ပါနဲ့။ ဘလော့ဂါထဲက တကူးတက စာလာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။ ကိုညီလင်းသစ်လည်း နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး မိသားစုဘ၀ သာယာချမ်းမြေ့ပါစေ။
January 4, 2012 at 6:04 AM Reply
အပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တိရှိရင် ကိုယ့်အီးမေးလ်လိပ်စာ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ကိုယ်ရေးပါ။ ကျွန်မ မိတ်ဆွေမေးလ်လိပ်စာကို အလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့ အဲဒီအကြောင်းဖတ်ချင်ရင် ရေးသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ ပန်းချီ Hein Lin နဲ့ ကို Aung Moe Win တို့ကို facebook မှာ မိတ်ဆွေအဖြစ် သွား add ပြီးဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာတော့ ကျွန်မ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေကိုပဲ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ လူသတ်မှုမပါဘူး ဆောရီး။ သူများ မေးလ်လိပ်စာ၊ သူများနာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာကို လုံးဝအားမပေးဘူး ဒါကြောင့် အပေါ်က မှတ်ချက်ကို ကျွန်မ အလုပ်ကပြန်ရောက်တာနဲ့ ဖျက်မှာဖြစ်တယ်။
January 4, 2012 at 2:13 PM Reply
ဘလော့ရှင် မငယ်နိုင်ရဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာ ( binaryster16@gmail.com ) ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ရေးသွားတာ စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ပါးစေ တယောက်ပါ..
စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ပါးစေ တွေက Myanmar Express ဘလော့ အပါအဝင် စစ်အုပ်စုက ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားတဲ့ ဖေါ်လံဖါးဘလော့တွေမှာလဲ အဲဒီ ဘလော့ရှင် မိတ်ဆွေရဲ့ အီးမေးလ် ( binaryster16@gmail.com ) ကို သုံးပြီး ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် ရေးထားတာ တွေ့ရတယ်..
ဒါတင်မက ဘလော့ရှင် မငယ်နိုင် နာမည်ကိုရော၊ ဘလော့ရှင်ရဲ့ အမျိုးသား နာမည်ကိုရော၊ ဘလော့ရှင်ရဲ့ သားလေး နာမည်ကိုပါ အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး စစ်အုပ်စု ဖေါ်လံဖါးဘလော့တွေမှာ ပေါက်ကရတွေ ရေးနေကျပါ..
စာဖတ်သူ လူဟောင်းတွေကတော့ စစ်အုပ်စု လက်ပါးစေတွေရဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်ကို သိပြီးသားပါ..
အခုတလောမှာ ပြည်တွင်းက စာဖတ်သူ အသစ်တွေ အများကြီး လာဖတ်နေကြလို့ ယုန်ထင်ကြောင်ထင် မဖြစ်အောင် အသိပေးတာပါ..
January 5, 2012 at 12:04 AM Reply
((((ဒီဆိုက်မှာ ABSDF အကြောင်းတွေရေးတယ်ကြားလို့လာဖတ်တာပါ
ABSDF ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အချင်းချင်း ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖတ်ချင်လို့ လမ်းညွန်ပေးပါ
မြန်မာနိုင်ငံက ကွန်နက်ရှင်က သိတဲ့အတိုင်းပဲ
January 4, 2012 2:45 AM
အထက်က မှတ်ချက်ကို ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်- ကျမမိတ်ဆွေ အီးမေးလ်လိပ်စာ Link နဲ့ လာထည့်ပြီး သူတော်ကောင်း လေသံနဲ့ သူများ အီးမေးလ်လိပ်စာကို အလွဲသုံးစား နောက်ဘယ်တော့မှ လာမလုပ်နဲ့။ ကျမမိတ်ဆွေရဲ့ မေးလိပ်စာပေါ်နေတဲ့ ရှင့်မူလ မှတ်ချက်ကို ပြောထားတဲ့အတိုင်း ဖျက်လိုက်တယ်။
January 10, 2012 at 8:31 PM Reply
မအား၇ာအနာပေါက်နေတဲ့ စစ်ခွေးတွေက တကယ်ကိုအာ၇ုံနောက်တယ်ကွာ
၇ု၇ှားမှာ ပြည်သူ့ငွေနဲ့ကျောင်းတက်နေပီး ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုး၇ှိ၇ာ၇ှိကြောင်း အကျိုးပြုစာတွေ မေ၇းဘဲ အ၇ည်မ၇အဖတ်မ၇တွေ လိုက်ေ၇းတယ်
စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဖျင်းတာ၊ ယုတ်တာ၊ ၇က်စက်တာ၊ လူသတ်တာ၊ ခိုးပီး သန်းကြွယ်သူဌေးတွေ ဖြစ်နေတာတွေကို အ၇ှိကိုအ၇ှိအတိုင်း ပြောတဲ့ ပြည်သူတွေကို ၇န်သူလိုသဘောထားတယ်
ပီးတော့ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးပြည်သူ့ဘလော့ဂါတွေကို အောက်တန်းကျတဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှောင့်ယှက်နေတာ ပြောမယုံကြုံဖူးမှသိ၇တော့တယ်
မြို့စွန်သင်္ချိုင်းဘေးက ကျူးကျော်၇ပ်ကွက်ကေ၇မျောကမ်းတင်၊ အုတ်ကြားမြက်ပေါက်၊ ကလေကချေ၊ ပေါက်လွတ်ပဲစား တွေ အတိုင်းပဲ
ဒီလိုကလေကဝကောင်တွေကို ပညာတော်သင်လွှတ်ထားတော့ တိုင်းပြည်နာတာပေါ့
အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ ဦးသိန်းစိန် says:
January 11, 2012 at 3:27 PM Reply
ပြည်သူများ၏ ဟစ်တိုင် စည်ထက် တီးနှက်ခံနေရသော
သားမောင် စစ်သည်များသို့ -
အဘ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပေးထားတဲ့ ဘွဲ့တွေကို ထောက်ကြပါဦး။
အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ ဦးသိန်းစိန်
သားမောင် စစ်သည်တွေက အဘရဲ့ ဗြောင်လိမ်ရဲတဲ့ အရှက်မရှိတဲ့ မျက်နှာပြောင်ကြီးကို မထောက်ကြရင်တောင် အဘ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပေးထားတဲ့ အဘရဲ့ ဘွဲ့တွေကို ထောက်ကြပါဦး။
"ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း အတိုင်း ချီတက်နေပါပြီ" လို့ အဘက အမေရိကန်က ကလင်တန်ကို ဗြောင်လိမ်လိုက်တာကို အဘက မရှက်ပါဘူး။
(အဘက တသက်လုံး ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား လုပ်လာတော့ အဲဒီလို မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး လိမ်လိုက်ရတာကို မရှက်ရေးချ မရှက်ပဲ။)
အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ နောက်လိုက်တွေက မြို့စွန်သင်္ချိုင်းဘေးက ကျူးကျော်၇ပ်ကွက်ကေ၇မျောကမ်းတင်၊ အုတ်ကြားမြက်ပေါက်၊ ကလေကချေ၊ ပေါက်လွတ်ပဲစား တွေရဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို မျိုးတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကို နှောင့်ယှက် တိုက်ခိုက်နေကြတယ် ဆိုတာကို ပြည်သူ့ဟစ်တိုင်ထက်မှာ မှတ်တမ်းအတင်ခံရလို့ အဘက ရှက်တာပါ။
("အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ" ဆိုတဲ့ မတန်မရာ ဘွဲ့ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပေးထားတဲ့ အချိန်မှာ တပည့်တွေက အဘတို့ တအုပ်လုံးရဲ့ ဇာတိ ဇစ်မြစ်ကို ဖုံးမနိုင်ဖိမရ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ထုတ်ပြနေလို့ မလုံတာ။)
ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်များ အောက်တန်းစား ပေါက်လွတ်ပဲစားများကဲ့သို့ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ နေထိုင်ပုံ says:
January 12, 2012 at 12:03 PM Reply
အပြာရောင် ခေါင်းစည်း စာသားကို နှိပ်ပြီး လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
(မဖတ်ရသေးသော ပြည်တွင်းမှ စာဖတ်သူ လူသစ်များ အတွက် လင့် ကို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။)
ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်များ အုတ်ကြားမြက်ပေါက်၊ ကလေကချေ များကဲ့သို့ ဥပဒေမဲ့ ပြုမူ ပြောဆို ရေးသားပုံ says:
January 12, 2012 at 12:05 PM Reply
ရုရှားရောက် စစ်ဗိုလ်များ Nge Naing ဘလော့အတု ပြုလုပ်ပြီး ညစ်ညမ်းစာများ၊ ပုံများ တင်ကာ ယုတ်မာ ပက်စက်ပုံ says:
January 12, 2012 at 12:31 PM Reply
Myo Chit Bama said...
မငယ်နိုင် ကျွန်တော့်အထင် ရုရှားက စစ်ဗိုလ် SLIP လဲ အဲဒီထဲမှာ ပါဝင် ပတ်သက်နေလောက်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် အခြား ရုရှားက စစ်ဗိုလ်တွေ မပါပဲ Slip ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတဲ့ blog ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မငယ်နိုင် အနေနဲ့ ရုရှားက စစ်ဗိုလ် စလစ် ကို သတိပေးသင့်တယ်ဗျ။ အရမ်း သရုပ်ပျက်တယ်။ တော် တော်လေး အရှက်မဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ပါဗျာ။
January 15, 2012 at 12:36 PM Reply
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကို လွှတ်လိုက်တာဟာ စစ်အုပ်စုက သူတို့ ကို ပြည်သူတွေက ဘယ်လောက် ခွင့်လွှတ်နိုင်လဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ကြည့်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီလောက် ဆိုးခဲ့တဲ့လူဟာ ပြန်လည် ထင်ပေါ်လာနိုင်သေးလား ဆိုတာ စမ်းကြည့်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူလုပ်ခဲ့ တာ ကောင်းခဲ့တာတွေရှိတယ် ဘာဘာညာညာ။
January 15, 2012 at 12:39 PM Reply
မြန်မာပြည် ဒီလောက် ဆိုးရွားသွားခဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံ နံပါတ် ၂ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါ (၂)
တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ဟာ စစ်သား စစ်စစ် မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့ တန်းတောင် ကောင်းကောင်း ရောက်ဖူးရဲ့ လား မပြောတတ်ဘူး။ စစ်တက္ကသိုလ် ဆင်းလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်သားတွေဟာ သေနတ်ကို သုံးပြီး ဥာဏ်နည်းနည်း နဲ့ ပဲ လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကတော့ ဥာဏ်ရှိပြီး ကောက်ကျစ်တဲ့သူပါ။ ကဲ.. ဘယ်သူဟာ ပို ကြောက်စရာ ကောင်းလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လို လူမျိုးကို ကျနော်တို့ အာဃာတ ထားစရာမလိုဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒီအတွက် အချိန်မရှိလို့ ပဲ။ တခြား တိုးတက်ရေး လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတိုးတက်ရေးမှာ ၀င်မနှောင့်ယှက်နိုင်အောင်တော့ သတိထားနေရမယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လုပ်ခဲ့တာတွေကိုတော့ မေ့မပစ်ပဲ ထပ်မခံရအောင် သင်ခန်းစာတော့ ယူရမယ်။
January 16, 2012 at 8:28 PM Reply
အခု အွန်လိုင်းမှာ ဟော့နေတဲ့ " မြန်မာ့အင်တာနက်ရဲ့ တည်ထောင်သူ ဖောင်ဒါ ဦးခင်ညွန့်" ဆိုတဲ့ စကားလုံး.... မှားတယ်... ပုဂံဆိုက်ဘာကို ဦးခင်ညွန့် စလုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက သူ့ အတွက်ပါ.... ဦးခင်ညွန့် လုပ်ခဲ့တာ တကယ်တော့ ကကလှမ်း အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ... သူမလုပ်ရင် သူ ကျန်ခဲ့တော့မယ်...
January 16, 2012 at 8:34 PM Reply
USA (new york) says:
January 17, 2012 at 2:57 PM Reply
ALL COMMENTER ,, IF (I'M SAY "if" ) HAVEING KNOWLEDGE, , OR ALL READER'RE NOT LIKE
YOUR BRAINLESS COMMENTER,,, WE CAN SEE
U KHIN NYUNT IS VERY SMART BRAIN. SO THEY (MYANMAR ARMY) SAVE OURS. THATWHY WE'RE THANK YOU MYANMAR ARMY,,U THAN SHWE, U MAUNG AYE, AND ALL MYANMAR ,,
ALL COMMENTER , PLEASE OPEN YOUR EYE AND BRAIN, THANK U;;
January 17, 2012 at 10:20 PM Reply
ဒီပို့စ်မှာ ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့ ဖတ်စေချင်လို့ သတင်းအချက်အလက်တွေ အဖြစ်လာထည့်ထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေမို့ ကျွန်မ ထားပေးထားပါတယ်။ ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ချက်ကို ရေးပြီး ဘလော့ဂ် C-Box တွေမှာ လိုက်ကြော်ငြာထားလို့ ဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာ အဲဒီ C-Box တွေကနေ အမြောက်အမြား လာလည်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးခင်ညွန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချစ်၍ဖြစ်စေ၊ မုန်း၍ဖြစ်စေ မြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာ ဦးခင်ညွန့်ဟာ စိုးမိုးနေရာယူနေဆဲဆိုတာတော့ ငြင်းလို့ ရမယ်မခင်ဘူး။ အဲဒီမှတ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူ အချင်းချင်းဆီက တယောက်နဲ့တယောက် သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာ ရှိရင်လည်း ကျွန်မ ဘာမှဝင်ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဓိကက သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ပေမဲ့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးဆွေးနွေးကြရင် အားလုံးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဆဲတဲ့အသုံးအနှုန်း ယုတ်ရိုင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းပါလာရင်တော့ အကုန်ဖျက်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်အသိပေးထားပါရစေ။ ကြော်ငြာသူကိုရော လာလည်သူအားလုံးကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရုရှက စစ်သားအချို့က မငယ်နိုင်ကို မဆီမဆိုင် တိုက်ခိုက်ထားသော မှတ်ချက်အချို့ says:
January 18, 2012 at 8:50 AM Reply
16 Jan 12, 04:19 AM
ကျော်ကြီး: ဘာသာရေးများများ လုပ်ပါ ၊အနှောက်ယှက်တွေ ရှိမယ် နော် ၊ ကိုယ်ခံရသည်ဖြစ် စေ အနိုင်ရသည်ဖြစ်စေ ၊ ဝါးလုံးမကိုင်ပါနဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေကို ရော မတင်ပါနဲ့ ၊ ရုပ်ဆိုးလွန်းလို့ ။
16 Jan 12, 02:54 PM
ကျော်ကြီး: ဘုရားတရားလုပ်နေကြတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးမလုပ်ကြပါနဲ...
16 Jan 12, 09:58 PM
Hell0: မငယ်နိုင် ခင်ဗျားကနိုင်ငံကိုချစ်တ်ာဆိုပြီး ဘာလို့ပြည်ပမှာထွက်ပြေးနေတာလဲ။ သတ္တိ၇ှိ၇င်ပြန်ပါလားဗျ။ မြန်မာပြည်သူကိုချစ်၇င် ခင်ဗျား ဘာလို့ ထွက်ပြေးတာလဲ ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင၀င်ပေါ့ဗျ
ရုရှက စစ်သားအချို့က မငယ်နိုင်ကို မဆီမဆိုင် တိုက်ခိုက်ထားခြင်းအပေါ် ပြည်သူ့အမြင် says:
17 Jan 12, 02:45 AM
အောက်တိုဘာမိုး: ဗမာလူမျိုးထဲမှာ အဲလို လူတွေ ရှိတာကိုတော့ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းသလို ရှက်လည်း ရှက်မိပါရဲ့ ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ သိရင် အတော် အရှက်ရစရာပါ။ မငယ်ရေ ဘာလုပ်လုပ် မကောင်းတာ ပြောတဲ့ သူ၊ လုပ်တဲ့ သူတွေကတော့ ရှိမြဲရှိနေမှာမို့ 
17 Jan 12, 02:47 AM
အောက်တိုဘာမိုး: စိတ်မပျက်ဘဲနဲ့ ကိုယ့် လမ်း ကိုယ် ဆက်လျောက်ပါလို့ အားပေးပါရစေ။
17 Jan 12, 06:45 PM
Nge Naing: အောက်တိုဘာမိုး ရေ၊ အရေးမပါတာတွေကို ခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့။ အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(((( Observer said...
အခုရက်ပိုင်းမှာ မငယ်နိုင်က ကိုမင်းကိုနိုင် တို့ ပို့စ် နဲ့ ဒေါ်စု ပို့စ်အသစ်တွေ ဆက်တိုက် တင်ထားတာကြောင့်ရော၊ ပြီးတော့ မင်းသားခေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူး ခင်ညွန့် ရဲ့ ပြည်ဖျက်လုပ်ရပ်တွေကို တိုတိုရှင်းရှင်း ရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေကြောင့်ရော စာဖတ်သူ အများကြီး လာဖတ်နေတာကို မြင်ရလို့ ကျော်ကြီး ၊ Hell0 ၊ all အပါအဝင် ရုရှက စစ်သားတွေက မခံချိမခံသာဖြစ်ပြီး မငယ်နိုင်ကို အသားလွတ် တိုက်ခိုက်နေတာ..)))
Observer - ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ စာအမြဲလာဖတ်ပြီး ကျွန်မ မအားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မကို မလိုလားသူတွေက အမြင်မတော်တာတွေ လာရေးထားတာတွေ့ရင် ၀င်ပြီးတော့ အမှန်ကို ပြောပြပေးတတ် အသုံးဝင်တဲ့ Links တွေကို လာတင်ပေးတတ်တဲ့ Observer တို့ Activist တို့ သမိုင်းလေ့လာသူတို့လို စာဖတ်သူတွေကို ဘယ်သူမှန်းမသိပေမဲ့ ကျွန်မ အမြဲတမ်းပဲ အသိအမှတ်ပြုပြီး ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ နောက်ထပ် ညွန်းပေးရင်လည်း ကျွန်မဆီကနေပြီး စာလာဖတ်သူတွေဆီ တစုံတရာ အကျိုးရှိ အသိတိုးသွားစေတဲ့ Links တွေကိုပဲ ညွန်းပေးချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာသားပါ မှတ်ချက်ထဲက Link ကို မထည့်ချင်လို့ ဖျက်လိုက်ရတာကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ကျွန်မကို သူများက မဟုတ်မဟပ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စော်ကားတိုက်ခိုက် စော်ကားတာကို မလိုလားသလို သူများပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကြောင်း ရေးထားတဲ့ Link တွေတာကိုလည်း အရေးပါ အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေ အဟုတ်တဲ့အတွက် ကျွန်မဆီမှာ မတင်ချင်လို့ပါ။ ဒီအတွက် Activist အနေနဲ့ ကျွန်မကို နားလည်ပေးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
January 19, 2012 at 6:19 AM Reply
၂၀ဝ၇ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့အရေးတော်ပုံရဲ့ အရှေ့မှာ ၁၉၉၆ ကျောင်းသားအရေးအခင်း ဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်ကွယ့်။ "ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိဘဲ" လို့ ဆိုရအောင် အဲဒီ ကျောင်းသားတွေ မသေသေးဘူးကွယ့်။ အဲဒီ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ဆိုတဲ့ လူကြီးလဲ အပြင်ဘက်မှာ အရှင်လတ်လတ်ကြီး ညွှန်ကြားနေတာကွယ့်။ လှည်းတန်းမှာ နံနက်လင်းအားကြီး ကတ္တရာလမ်းပေါ်ထိုင်ရင်း လက်ချင်း ချိတ်တွဲထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို မီးသတ်ပိုက်နဲ့ အနီးကပ် အတင်း ထိုးခွဲပြီး ကားပေါ် ပစ်တင်ခိုင်းတာ အခု ရွှေဘိုထောင်က လွှတ်တဲ့ထဲ ပါတဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ရဲ့ လက်ရုံး ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်အောင် တဲ့။ အဲဒီတုန်းက ဗိုလ်မှူးချုပ် မဟုတ်သေးဘူး ထင်တယ်။ အမိန့်ရ အနီးကပ် ညွှန်ကြားသူပေါ့။
ထောက်လှမ်းရေးတစု ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ မန္တလေး သံဃာ့အရေးအခင်း ဆိုတာလဲ မှီလိုက်သူတွေ ရှိသေးတယ်ကွယ့်။ ကျောင်းသားတယောက်ကို မမိလို့ အမေနဲ့ နှမကို (အလယ်တန်းကျောင်းသူတောင် မချန်) ထောင်ထဲ ဖမ်းထည့်လိုက်တာကော ဗိုလ်ခင်ညွန့် တော်တဲ့ အချက်လို့ ပြောဦးမလား။ မျှားခေါ်တတ်လိုက်တာ ပေါ့နော်။
အဘညွန့် ဘာလုပ်ခဲ့သလဲတော့ မသိပါဘူး အဘညွန့်ရဲ့ သားသမီး အမ်အိုင် (M.I.) တွေကြောင့် တနိုင်ငံလုံး ဇိမ်နန်းတွေ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဖွင့်ရဲလာတာတော့ အတော် ထင်ထင်ရှားရှားပဲ။ တဖက်ကနေ လှည့်ပြီး ကျေးဇူးတင်ရမယ် ဆိုရင် ကိုရင်ချက်ကြီးတို့ ပြည်တွင်းဖြစ်ကုန်ကြမ်း ရစေဖို့ စတင် မိတ်ဆက် ကျေးဇူးပြုခဲ့တာ အဘညွန့်ရဲ့ အမ်အိုင် (M.I.) တွေပဲ။
January 19, 2012 at 6:46 AM Reply
မခံခဲ့ရဘူးတဲ့ လူတွေကတော့ ခံခဲ့ရတဲ့ အမြင်ကို ဘယ်သိမလဲဗျ။ ခင်ညွန့် ကြောင့် မိသားစုတွေ သားတကွဲ၊ မယားတကွဲ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေ၊ လူ့ဘ၀ သက်တမ်း တ၀က်လောက်ကို ထောင်ထဲမှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတာတွေ၊ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်နေတာတောင် ကျီးလန့်စာစား နေခဲ့ရတာတွေ၊ ..... ပြောရရင်တော့ ကုန်မှာတောင် မဟုတ်ဘူး။
ဒီလို ပြည်သူ့ဘဝပေါင်း များစွာကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ခင်ညွန့်လို လူမျိုးကို အကာအကွယ် ပေးတဲ့ သူတွေ facebook ပေါ်မှာလဲ အတော် များသားကလား။ ဒီလူကြီးရဲ့ လက်တံက တော်တော် ရှည်သေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ (ခင်ညွန့်ရဲ့ တပည့်ဟောင်းတွေ တော်တော်များများလဲ facebook ပေါ် ရှိနေတာ သေချာတယ်။)
(အခု တိုင်းပြည် အပြောင်းအလဲ လုပ်ပြနေချိန်မှာ သူတို့ အာဏာ ထိပါးမှာ မြင်လို့ သူတို့အာဏာကို ထိပါးနိုင်သူတွေကို ကိုက်ခိုင်းမလို့လား မသိ၊) အဲဒီ မြွေပွေး ခင်ညွန့် ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြန်ပြီပေါ့။
January 20, 2012 at 1:14 AM Reply
January 20, 2012 at 1:22 AM Reply
January 20, 2012 at 1:29 AM Reply
January 21, 2012 at 11:53 PM Reply
နောက်ကျမှ ရောက်လာပေမဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ မင်္ဂလာခရီး ကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဖြတ်သန်း နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်နော်
January 23, 2012 at 6:38 PM Reply
ဒီလို စနစ်ဆိုးကြီးမှာ ကျွန်မဟာ လူဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ၁၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူတွေ မတရား အသိမ်းခံရ၊ ၂၅ ကျပ်။ ၇၅ ကျပ် တန်တွေ မတရား အသိမ်းခံရ။ ကိုဖုန်းမော် ကျောင်းသားအရေးအခင်းက စခဲ့ရတဲ့ ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုမှာ ကျွန်မ စတုတ္ထနှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ တစ်ဦးပါ။
January 23, 2012 at 6:39 PM Reply
January 23, 2012 at 6:41 PM Reply
January 23, 2012 at 6:42 PM Reply
January 23, 2012 at 6:43 PM Reply
January 23, 2012 at 6:44 PM Reply
January 23, 2012 at 9:14 PM Reply
အပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ "ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေတော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့" အပိုင်း (၁) နဲ့ (၂) Spam ထဲကို ရောက်နေတယ် ထင်တယ်..
24 Jan 12, 07:36 PM
သားထူးရေ ထည့်လိုက်ပြီ၊ ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်း ၀င်ရေးနေသူတွေကြောင့် Moderation ခဏ လုပ်ထားလို့ မ၀င်တာပါ။ ))
" ပြည်သူ့မျက်ရည်နဲ့ ခြေ တော့ မဆေးလိုက်ကြပါနဲ့ " ဆောင်းပါးတပုဒ်လုံး အပြည့်အစုံ ပေါ်လာပါပြီ
အန်တီငယ့်ဘလော့မှာ ယုတ်ယုတ်ရိုင်းရိုင်း ၀င်ရေးနေတဲ့ စစ်ကျွန်တွေကြောင့် Moderation ခဏ လုပ်ထားလို့ တချို့အပိုင်းတွေ မစုံဘဲ ဖြစ်နေတာကိုး
အန်တီငယ့်ဘလော့မှာ ရေးထားတာတွေက အမှန်တွေချည်းပါ
အန်တီငယ့်ဘလော့မှာ အမှန်တရားတွေကို ရေးထားတာကို အဲဒီ စစ်ကျွန်တွေက မမြင်ရဲဘူးလေ
ပြီးတော့ အန်တီငယ့်ဘလော့မှာ စာလာဖတ်သူတွေ များလာလို့ အဲဒီကောင်တွေက ပိုပြီး အခံရခက်နေတာပါ
ဒါပေမယ့် အန်တီငယ့်ဘလော့မှာ ရေးထားတဲ့ အမှန်တရားတွေကို "မမှန်ပါဘူး" လို့ သက်သေ အထောက်အထားနဲ့ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ငြင်းခုံနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း အဲဒီ စစ်ကျွန်တွေမှာ မရှိဘူးလေ
ဒီတော့ အဲဒီ စစ်ကျွန်တွေက အန်တီငယ့်ဘလော့မှာ အယုတ္တအနတ္တ တွေ ရေးပြီး အန်တီငယ့်ဘလော့ကို စာဖတ်သူတွေ မလာချင်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နှောင့်ယှက်နေတာပါ
စစ်ကျွန်တွေက အောက်လမ်းနည်းနဲ့ အန်တီငယ်ကို တိုက်ခိုက်နေတာပါ
January 25, 2012 at 12:27 AM Reply
January 25, 2012 at 1:44 AM Reply
January 25, 2012 at 2:50 AM Reply
January 25, 2012 at 7:10 AM Reply
January 25, 2012 at 7:11 AM Reply
January 25, 2012 at 7:35 AM Reply
January 27, 2012 at 8:28 AM Reply
ခင်ညွန့်ကိစ္စ တပ်ထဲမှာ အတော်လေး မကျေမနပ် ဖြစ်နေတယ်လုို့ ပြောနေကြတယ်။
January 27, 2012 at 9:55 AM Reply
January 27, 2012 at 9:56 AM Reply
January 27, 2012 at 9:57 AM Reply
January 27, 2012 at 9:58 AM Reply
Mg Bhakhat - ခင်ရွှေ စီးပွားရေးလုပ်ပုိုင်ခွင့်တွေ အမျိုးမျိုး ရအောင် ခင်ညွှန့်က အခွင့်အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဘယ်လောက် ကူညီ မစခဲ့သလဲ ဆုိုတာ ပေါ်လွင်တယ်။
January 27, 2012 at 10:00 AM Reply
အင်း............ခင်..က...ခင်ကို ပေးတာ ....စိတ်မကောင်းလိုက်တာ
အခုလက်ရှိ အမေရိကားမှာ ဝေါလ်စထရိ ကိုသိမ်းပိုက်ကြ ဆိုပြီး လှုပ်ရှားနေတာ ဘာကြောင့်လဲ။။။။။။။။။။။။။။
စီးပွားရေးနှင့် မီဒီယာတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး ချယ်လှယ်နေကြတာကို ဆန့်ကျင်တာပဲဖြစ်တယ်။
January 27, 2012 at 10:01 AM Reply
January 27, 2012 at 10:03 AM Reply
ကလိမ်ကကျစ် ခင်ညွန့်က မြို့မေတ္တာခံယူရန် ကြိုတင် အကွက်ချကာ တမင် ထောင်အကျခံပြသည့် ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင် လုပ်ဇာတ်ဖြင့် ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာကို မျက်လှည့်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသည့် အယူအဆ (၁) says:
January 27, 2012 at 1:40 PM Reply
လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နေ၀င်းမြေး ၊ ခင်ညွန့်တို့ဟာ ဗမာပြည်သူတွေရဲ့ မြို့မေတ္တာ ခံယူနေကြခြင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကတဲက ခင်ညွန့်က ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုပြီး န၀တ စစ်အုပ်စု တစ်ခုလုံး စနစ်တကျ ကြိုတင် အကွက်ချ ဖန်တီး ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ဇာတ် ဖြစ်ပါတယ် ။
January 27, 2012 at 9:42 PM Reply
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ အပိုင်း (၇) says:
January 28, 2012 at 11:37 PM Reply
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ အပိုင်း (၇) ၂ says:
January 28, 2012 at 11:39 PM Reply
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ အပိုင်း (၇) - ၃ says:
January 28, 2012 at 11:41 PM Reply
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ အပိုင်း (၇) - ၄ says:
January 28, 2012 at 11:42 PM Reply
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ အပိုင်း (၇) - ၅ says:
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ အပိုင်း (၇) - ၆ says:
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ အပိုင်း (၇) - ၇ says:
January 28, 2012 at 11:47 PM Reply
Credit - http://www.pyustate.com/2012/01/blog-post_28.html
January 16, 2013 at 1:22 AM Reply
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ကို လွှတ်လိုက်တာဟာ စစ်အုပ်စုက သူတို့ ကို ပြည်သူတွေက ဘယ်လောက် ခွင့်လွှတ်နိုင်လဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ကြည့်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီအပေါ်က ကွန့်မန့်ပေးတဲ့သူအနေနဲ့ စိတ်ရောဂါဆရာဝန်နဲ့ ပြသင်တယ် မနက်ဆေးသောက်ရင်ပုလင်းလှုပ်သောက်ပါ ဆေးအနည်ထိုင်ရင် နေမြင့်တာနဲ့ ရောဂါသည်းလိမ့်မယ်
January 1, 2014 at 5:09 AM Reply